Miara-miasa amin'ny UNWTO i Goatemalà hametraka ny Sustainable Tourism Observatory
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Miara-miasa amin'ny UNWTO i Goatemalà hametraka ny Sustainable Tourism Observatory
Ny Observatory vaovao dia ao amin'ny tanànan'ny La Antigua Guatemala, UNESCO World Heritage Site ary toerana fizahan-tany lehibe. Notarihin'ny Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) ary notohanan'ny governemanta Goatemala, hanangona antontan-kevitra sy porofo ara-tsiansa ny Observatory satria manara-maso ny vokatry ny fizahan-tany ny tanàna manan-tantara. Ity angon-drakitra ity dia hampiasaina hanombanana ny fomba tsara indrindra hampiasana ny fizahan-tany mba hanohanana ny fitomboana sy ny fampandrosoana maharitra.
“Miarahaba antsika amin'ny fomba mafana ny fidiran'ny Antigua amin'ny tambajotram-panadihadiana maneran-tany. Mampiseho ny fanoloran-tenan'i Goatemalà goavana amin'ny fizahan-tany ho hery ho an'ny tsara, "hoy ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili. “Ny Observatory dia hiteraka porofo marobe kokoa momba ny fiatraikany ara-toekarena, tontolo iainana ary sosialy misy eo amin'ny fizahan-tany any Antigua sy ny manodidina. Hanamora ny fandraisana fanapahan-kevitra izany mba hahafahan'ny fizahantany manohy fampandrosoana maharitra. "
Ny fananganana ny Observatory vaovao dia nambara nandritra ny fivoriana faha-64 an'ny Vaomieram-paritra UNWTO ho an'ny Amerika, natao tao Antigua (15-16 Mey) koa. Mandrosoa, ny Observatory dia hiara-hiasa amin'ny vondron'olona manam-pahaizana eo an-toerana. Ity fanoloran-tena amin'ny fidiran'ny mpiray tsikombakomba eo an-toerana ity dia singa lehibe iray amin'ny INSTO Observatories manerantany.
Jorge Mario Chajón, Tale Jeneralin'ny INGUAT, dia nanampy hoe: Raisinay ny fotoana ahafahana miara-miasa amin'ny UNWTO ary hiara-hiasa hahatonga ny fizahan-tany ho ampahany lehibe amin'ny fandaharam-pandrosoana maharitra 2030. ”
Manamora ny dia ny Etiopiana Airlines amin'ny alàlan'ny fampiharana finday nohavaozina
Rolls-Royce dia manolotra milina famokarana Voahangy 15 voalohany any Bombardier